Inbound Marketing Mere Dị Mfe | Indianapolis Web Kere
Mpempe akwụkwọ: Inbound Marketing Mere Dị Mfe
Satọdee, Nọvemba 9, 2013 Sunday, November 17, 2013 Bọọlụ Lorraine
Naanị mgbe ị chere na ị nwere njikwa na ịre ahịa ịntanetị a, ihe ọhụụ ọhụụ. Ugbu a, Inbound Marketing na-eme ngagharị. Onye ọ bụla na-ekwu maka ya, mana gịnị ka ọ bụ, olee otu ị si amalite, kedụ ngwaọrụ ị chọrọ? Inbound marketing na-amalite site na ozi efu, enyere site na ntanetị mmekọrịta, ọchụchọ, ma ọ bụ mgbasa ozi akwụ ụgwọ. Ebumnuche bụ ịkpalite ọchịchọ ịmata nke atụmanya ma mee ka ha gbanye email ha, yana ikekwe nọmba ekwentị, maka ọdịnaya gị.
Yabụ kedu ebe ị na-amalite?
gị gaje ịbụ ahịa na-mgba na. Azịza gị kwesịrị inye ha ozi zuru oke, (na-enweghị oke ire ere) gosipụta nka gị.
Mepụta ọdịnaya - Nbudata na-abịa n’ụdị na nha niile gụnyere akwụkwọ ọrụ na ndenye ọdee, ederede, vidio, faịlụ ọdịyo ma ọ bụ mpempe akwụkwọ. Ọ dịghị mkpa ka ọ dị ogologo ma ọ bụ sie ike, mana ozi zuru oke ka atụmanya dị egwu ga-akpali ịjụ maka nkọwa ndị ọzọ gbasara ihe ị bụ n'ezie do ree ego.
Ibe Ọdịda Nkwalite gị niile na mpụga ga-eme ka okporo ụzọ gaa na ibe a. O nwere ike ịbụ peeji nke weebụsaịtị gị, blog post na otu isiokwu metụtara ya, ma ọ bụ peeji ọdịda nke nwere naanị otu nzube: iji mee ka ndị mmadụ zụọ email ha maka ọdịnaya gị Inwe URL pụrụ iche maka mkpọsa ahụ ga-enye gị ohere ịlele irè nke ọwa ahịa ọ bụla na otu etu ọnụego mgbanwe gị siri sie ike. Iji wuo peeji ọdịda ọdịda, anyị nwere mmasị na ya Mbido ngwa mgbakwunye maka wordpress jikọtara naMpempe akwụkwọ maka nchịkọta data.
Onye Na-aza Onwe Gị Ọ bụghị onye ọ bụla nke na-ebudata ihe ọmụma gị taa dị njikere ịzụta. Ọ pụtaghị na ha agaghị azụta n'okporo ụzọ. Atụmatụ gị ga-enwerịrị ọtụtụ usoro iji metụta uru dị ogologo oge. Anyị na-eji njirimara autoreponder naMpempe akwụkwọ izipu ozi email, nke dị ka ihe ederede onwe onye otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ mgbe nbudata mbụ. Ihe ndetu a na -emekarị mkparịta ụka, nzaghachi na arịrịọ maka ozi ndị ọzọ. Anyị na-amasịkwa Kpọtụrụ na mgbe niile dị ka ndabere nke a ogologo ntapu mkpọsa.
Mbanye okporo ụzọ na Atụmatụ Nkwalite. Ndị mmadụ agaghị achọta ebe ọdịda gị na mberede. Kekọrịta njikọ na nyiwe mmekọrịta. Ọ dị mma ịjụ ndị enyi na ndị mmekọ mmekọrịta ịkekọrịta njikọ na obodo ha ma ọ bụrụ na ị dị njikere ịme otu ihe ahụ maka ha. (Ma ị kwesịrị ịdị). Ọ bụrụ na ị nwere mmemme email oge niile Gụnye njikọ ahụ kwa. Nke a nwere ike inyere gị aka ịchọta ezigbo atụmanya na ntọala data gị. Ejuchila ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ gị n'ọtụtụ nhọrọ, mana ịgbakwunye otu oku iji mee ihe na ụkwụ, nkụnye eji isi mee ma ọ bụ akụkụ mmanya ga-eme ka atụmanya nwere mmasị gaa na peeji nke ọdịda gị. Ikwesiri iji PPC mee ka okporo ụzọ gaa na peeji nke ọdịda gị? Nke ahụ dabere na usoro ahịa gị. Ọ bụrụ n’inwere usoro ị ga - eji gbanwee kọntaktị na - akpata ndị ahịa mgbe ahụ itinye ego na mgbasa ozi nwere ike ịkwụ ụgwọ. Ejila PPC mee ka ị mara mmata.
Aka onwe. Akpaghị aka usoro ga-emepe ụzọ, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ezigbo ahịa n'ihi na ị kwesịrị ị na bulie ekwentị na-agwa ndị olileanya. Hà hụrụ na ozi ahụ nyere aka? Ha nwere ajụjụ ndị ọzọ.
Inbound marketing bu uzo mbu nke ahia, obughi usoro dum.
Chọrọ ịmụtakwu ihe? Budata akwụkwọ ọrụ anyị ma ọ bụ lelee nzukọ ọmụmụ ihe anyị na November 20th. Dị ka onye na-agụ Martech Zone, jiri koodu ego anyị: Ahịa 13 ma jee na-akwụghị ụgwọ.
Tags: inbound marketinginbound ahịa akwukwookirikirimpempe akwụkwọ
Lorraine Ball Saturday, November 9, 2013 Sunday, November 17, 2013
Lorraine Ball afọ iri abụọ na ụlọ ọrụ America, tupu ya abịa n'uche ya. Taa, ị nwere ike ịchọta ya na Roundpeg, obere ụlọ ọrụ ahịa, nke dị na Kamel, Indiana.
Tinyere otu ndị nwere nkà pụrụ iche (nke gụnyere nwamba Benny & Clyde) ọ na-akọrọ ihe ọ maara banyere imewe weebụ, mbata, mgbasa ozi mmekọrịta na ahịa email.
N'ịbụ ndị nyere aka na akụ na ụba azụmaahịa na Central Indiana, Lorraine lekwasịrị anya n'inyere obere ndị nwe ụlọ ahịa aka ịchịkwa ahịa ha.
Marketingzụ ahịa data na-ekpo ọkụ!
Ntuziaka nke Design Design Graphic
Nov 16, 2013 na 1:24 PM
Ezigbo isiokwu. Enwere m mmasị iji lelee webinar.
Adịghị m onye ofufe nke na-achọ ndu oyi, onye na-amabeghị gị, inye gị nọmba ekwentị iji nweta akwụkwọ ọrụ. M kụrụ bọtịnụ azụ ozugbo. Amaghị m gị nke ọma, ị makwaara m nke ọma. Ọ dịghị onye n'ime anyị kwesịrị inwe mmasị na-ekwu okwu na ekwentị ka na.
Site na adreesị email m, ị nwere ike ịga n'ihu njikọ ahụ, kpọọ m ka m kpọghachi ma ọ bụrụ na anaghị m eme ya, wdg, wdg.Mgbe m dị njikere ịhapụ ka ị kpọọ m, ọ gaara abụ n'ihi na m nwere atụmanya nwere mmasị . Abụ m onye na-akwado nọmba ekwentị n’ezie ma ọ bụrụ na usoro iheomume dị mkpụmkpụ, dịka ịzụ ụgbọ ala. Ma agaghi aju rue peeji nke Daalụ, yabụ na m nwere email izizi.
Nov 17, 2013 na 8:32 AM
Anyị rụrụ ụka ọtụtụ n'ime banyere uru na ọghọm dị na nọmba ekwentị. Anyị mere mgbanwe ahụ ka ọ bụrụ nnwale ma chọpụta na nsonaazụ ya dị mma. Anyị nwere atụmanya ruru eru karị na nbudata ụdị ahụ.
Ọ bụ ezie na anaghị m akwado usoro ahụ maka ndị ahịa ọ bụla, ọ na-arụ ọrụ maka anyị
Nov 16, 2013 na 1:27 PM
Njikọ 'lelee seminarị anyị' na-akpọga m na peeji nke nbanye Kọntaktị Nbanye?